China LH500 Truck Hand Truck LH5002 With Extra Large Mkpịsị ụkwụ efere emeputa na soplaya | Duoduo
Oldkpakọba akpa trolley
Nrụgide oru Aka Handgbọala
Rollọ oriri na ọrolụ Tụ Trolley
Nrụgide oru Aka Truck LH5002 With Extra Large Toe Plate
Nkebi nke: LH5002
Mepee Nha: 51 × 55.5x127CM
Akara Kpọkọtara: 30 × 55.5X100CM
Efere Efere: 24.5x38CM
Ike: 150 KGS
Nnukwu aka ụgbọala, maka iji n'ụlọ nkwakọba ihe. Efere a na-enwe ike ịpịgharị, yana enwere ike idozi aka nke ụgbọala ahụ na elu na ala, ọ nwere ike ịchekwa ohere ma weta nkasi obi dị ukwuu na ndụ anyị kwa ụbọchị.
Easy n'ogige atụrụ, mfe iji.
Nkasi obi "P" njikwa.
Extra nnukwu mkpịsị ụkwụ.
Oké ọrụ welded etiti na replaceable axle.
High mmetụta ehiwe na anọchi bọl biarin
Ezubere ụgbọ ala a nke 150kgs maka iji ya kwa ụbọchị. Elu àgwà ewu na a arọ nlele beveled mkpịsị ụkwụ efere na-enye pụrụ ịdabere na anwụ ngwa ngwa na mfe loading nke arọ ihe. Ugbo ala a na-adaba adaba na-agbazi taya na-eji ire ụtọ na ihe nchekwa P. P-njikwa na-enye ohere maka otu ma ọ bụ abụọ aka ọrụ. Ọ nwere tubing maka ike na ogologo oge. Ogologo ahụ na-enye ngwa ngwa hi-stacking dị mma. Efere mkpịsị ụkwụ sara mbara na-enye ohere ibugharị ihe ndị buru ibu karị. Ndị na-eche wiil ahụ na-echebe ibu ahụ site na taya. Ihe siri ike na-agba ume na-ebugharị mgbe niile. Uwe mkpuchi ntụ ntụ na-enye ogologo oge.
Zọpụta azụ gị mgbe ị na-ebugharị ma ọ bụ na-ejikwa nnukwu ngwa ụlọ na ihe ndị ọzọ buru ibu n’onwe gị. Ihe Buffalo Ngwaọrụ 150kgs dị oke egwu ga-enyere gị aka ịnweta friji, ihe nchacha, na draya site na azụ nke ụgbọala gị n'ime ụlọ gị nke ọma. Efere mkpịsị ụkwụ sara mbara nke na-enye nnukwu ibu ọtụtụ nchara ịnọdụ ala. Ihe nkedo a na-adaba adaba nke P na-eme ka dolly di mfe ma jikwaa ya. Printdị ụkwụ sara mbara, na-enye nnukwu ibu nkwụsi ike na nkwado. Ewubere ụgbọala a dị arọ ọrụ ka ọ dịrị. Nhazi ahụ nwere axle wheel na-anọchi anya ya, na otu inch nke dayameta nke ígwè tube na-agbanye ọkụ.
Nke gara aga: DuoDuo Nrụrụ Ọrụ Nnukwu Aka Aka LH5001 Dual Handle Hand Truck
Osote: DuoDuo Multi ọrụ Folding Wagon DX6001with Universal Wheels & Kemeghi njikwa
Best Nrụgide oru Hand Truck
Nrụgide Ọrụ Nnukwu Aka Aka
Nrụgide oru arọ mpịachi Hand Truck
Nrụrụ Ọrụ Dị arọ Aka Cart
Nrụgide oru Aka Dolly
Nrụgide oru Aka Trolley
Nrụgide Ọrụ Dị arọ Trọ 300kg
Nrụgide oru Aka Truck Dolly
Nrụgide oru dị arọ 300kg
Nrụgide oru Dịrị ịrị ịrị Trolley
Nrụgide ọrụ dị arọ Dolly
Handgbọ Aka Metal
Dgwè Dolly Cart
DuoDuo 3 na 1 aluminum multifunction n'aka ụgbọala ...
DuoDuo Nrụrụ Ọrụ Dị arọ Hand Truck LH5005 With Extra ...
DuoDuo multifunction n'aka ụgbọala LH5006 Converti ...
DuoDuo Nrụrụ Ọrụ Dị arọ Hand Truck LH5001 Dual Handle ...
5F-50497, Ọnụ Gatezọ 75má 75 District 4, Yiwu International Trade Market, Zhejiang, China 322000
Right Copyright - 2019-2020: All Rights echekwabara. Featured ngwaahịa - Mkpado na-ekpo ọkụ - Sitemap.xml - AMP Ekwentị